खुल्लामन्च: November 2011
गजल : सिरानी
मायालुले खुशीले तेर्स्याए मलाई हातै सिरानी,
गाली तितो पाए पनि त्यहि बातै सिरानी ।
अन्धकारमा खोजी हिंड्दा लडबडिदैं कतै,
भेटें भने तिमीलाई त्यहि रातै सिरानी ।
तिर्खा लाग्यो भौतारिंए खोज्न पानीलाई,
थोपा नआउने कुवा भेट्ने मेरो आंतै सिरानी ।
पठाउन तिमिलाइ लेखें कत्ति पत्र,
भेटिएन हल्कारा चिट्ठीको खातै सिरानी ।
ओखलमा निदाउन के सख्थें र म त ?
छाम्दा भेटिए कुनाको त्यहि जांतै सिरानी ।
रुंदा-रुदा सुके मेरा आँखा भने पनि,
सम्झनामा आउने तिम्रा घातै सिरानी ।
कालो बादल मडारिदां झर्ने यत्रा असिना
नछेकिने हातमा भाको छातै सिरानी ।
लैला-मजनु, मुना-मदन कस्ता कस्ता कथा
नजोडिने तिम्रो मेरो अनौठो नातै सिरानी ।
मुक्का खाएं, धोका खाएं, के नै छ र बांकी ?
सडकमा सबले हान्ने कठोर लातै सिरानी ।
हल्लाउंदैं खुट्टा सडकमै हिंड्न कति मज्जा,
कुनो-काप्चो ठोक्काउने रक्सीको मातै सिरानी ।
प्रेम भनि कन्दमुल खोज्दै हिडें बनमा,
भेटिएका घसेटा र स्याउलाका पातै सिरानी ।
मायालुले खुशीले तेर्स्याए मलाई हातै सिरानी
Posted by Unknown Labels: गजल/गीत
World's Top 15 Blogs :
Top 15 Most Popular Blogs | November 2011
Here are the 15 Most Popular Blogs as derived from our eBizMBA Rank which isaconstantly updated average of each website's Alexa Global Traffic Rank, and U.S. Traffic Rank from both Compete and Quantcast."*#*" Denotes an estimate for sites with limited Compete or Quantcast data. Last Updated: November 8, 2011
Source : www.ebizmba.com
The Most Popular Blogs | Updated 11/8/2011 | eBizMBA
लुटेराहरुको देश :
एउटी आमा घांस काट्न जान्छिन
अनाहकमा तातो गोली खान्छिन,
बाबुरामजीको घरको पल्लो बनमा पनि
यो घटना घटेको बाबुरामजीलाई थाहा छ ।
चुरे डांडांमा बस्तु चराउन एउटी बहिनी जान्छिन
नरपिपासुद्दारा रक्ताम्य बलात्‍कृत हुन्छिन्,
प्रचन्डजीको घरमाथीको डांडामा घटेको घटना
प्रचन्डजीलाई पनि राम्ररी थाहा छ ।
एउटा बच्चा स्कुल जान्छ
बाटोमा अपहरणमा पर्छ,
रौतहटको मैदानको यो अपहरण
माधबजीलाई मज्जाले हेक्का छ ।
पूजा गर्न मन्दिर हिडेकी कान्छीको
पूजा-थाली सहित गहना लुटिन्छ,
शुशिलजीले पूजा गर्ने मन्दिरको घटना
शुशिलदालाई सम्झाउनै नपर्ला ।
बिहान पसल खोल्न हिंडेको पसले
भारतीय गुन्डाको छुरी खान्छ,
गच्छदारले लेबी उठाउने बजारको कथा
हामी मुलाले के सम्झाउनु पर्ला र ?
बाटो बनाउन आयोजित गाऊको कचहरीमा
लठैतहरुले भाटाले टाउको फुटाउंछन,
झलनाथजीको गाउंको कथा
त्यहि गाउंलेहरुलाई सोधे मात्र थाहा हुन्छ ।
पूल बनाउने ठेक्कामा गुण्डाहरुको बोलवाला
परशुराम र चरीले लुटेका सम्पत्ती,
भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्नुहुने
के पी दाईलाई थाहा होला ।
बी पी स्टाइलको दाह्री काटेर
मार्क्सबादी भ्रस्टाचार गर्नुहुने,
अबसरबादीका पर्याय हाम्रो कर लुट्नुहुने
जे पी दाईलाई के देलान शुशासन ?
बाहुनी बिहे गरेको बाहनामा कुनै श्रेष्ठले
बारीको कुनामा ढुंङ्गेलजीको गोली खान्छन,
भाइ मरेको लगत्तै दाई मारेका कथा थाहा होला
बर्षारामजीलाई पनि राम्रै सित ।
गोरखकालिकाको कसम खाने सेनाहरुले
गोरखनाथ गणमा गरेका हत्याका घटनाहरु,
ब्यारेकै छेउमा भल्भल्ती बगेका रगतका खोला
देखेकै थिए होलान्, छत्रमानजीले पनि ।
आज कमल थापाहरु गर्जिन्छन्, राजा चाहियो रे
कुरो पनि ठिकै होला आखिर,
राजा फालेर जनताले के पाए त ?
कोहि हुनु र नहुनुमा हामीले के पायौ ?
गुन्डाहरुको राज, भ्रश्टाचारीहरुको बिगबिगी
लठैतहरु पछि लगाउने नेताहरुले,
मुस्ताङ चढे'नी, डा. पढे'नी
बैध्य र झांक्रीहरुले झारफूक गर्ने हुन हामीलाइ ।
भुकम्पले ढलेकाहरुले कम्बल पाएनन्,
भोकाहरुले ढिंडो पा'का छैनन्,
झाडापखालावालाहरुले जीबनजल नदेखेको देशमा
नयाँ अनुहारमा जोगीको भेषमा आउनेहरुले के गरे ?
हत्यारा बचाए, आममाफी दिए, आफू मुस्ताङ चढे
प्रथम महिलालाई पजेरो दिए, अघोषित मन्त्रालयहरु दिए ।
हिजो कांग्रेसले, एमालेले जे गरेको थियो,
आज पनि त्यहि भयो ।
चिरिन्जिबी जेलमा, गच्छदार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
गुप्ता सरकारको प्रवक्ता, शरदसिंह मधेशी नेता !
प्रभु शाहहरुको हालिमुहालि, बादलको "र"
बिचरा एक्लो रमेश खरेलले के गरोस ?
खानु खाए देशलाइ, पिउनु पिए रगत
स्विस बैंकमा खाता, जनतालाई आश्वाशन
क्या गजबको देशमा जन्मिइएछ गांठे
लुटेरै-लुटेरा भातमाराहरुको देश,
लुटेराहरुको देश ।
ब्लगको जन्मदिन :
मलाइ आमाले कटेरामा पाउनुभा'को रे । श्राबणको झरीको बेला थियो रे, त्यो । चिसो मौसम । मेरो ब्लगको जन्म चाँही अमेरिकाको पुष (जाडो) महिनामा भा'को । आजभन्दा तीन बर्ष अगाडी गूगल चलाउंदै गर्दा माउस संगको सहबासले एकै छिनमा जन्मिएको मोरो "खुल्लामन्च", तीन बर्ष लागेछ । नेपालबाट निर्यातित कम्बल ओढ्दै शायद अमेरिकाको सबैभन्दा चिसो ठाउं बोस्टनको जन्मभुमीको खुल्लामन्चले दुई बर्ष पूरा गरेछ । यसको जन्म खास गरेर अक्टोबर १३ तारिखका दिन तदानुसार रक्सीको मातमा जाडोको तिथिमा भएको हो । परदेशी जिन्दगी, अनाहकको चिन्ता र बेबारिसी तालले गर्दा नभ्याएर १३ तारिख मैले बिहानै यस्सलाई एउटा माउसको क्लिक्के केक खुवाएर आज जन्मदिनको पार्टी मनाउंदैछु ।
साझेदारी ब्लग दौंतरिको 'फलो लिन्क्'का अनुसार अहिले ३३१ जना नेपाली ब्लगरहरु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । आज भन्दा तीन बर्ष अगाडि नवनिर्मित ब्लग दुई जनाले फलो गरिदिए "आहा !!!" हुन्थ्यो । ३६१ जनाको ब्लगिङ सक्रियताले साहित्य, संगित र सक्रियताका कम से कम सबै क्षेत्र र शिर्शकलाई समाबेश गरिरहेको छ । ३६१ जनामा ६१ जनाले मात्रै आ-आफ्नो क्षेत्र र जानेका रचना समाबेश गरि लेखेमा'नि जिबनचैर्याका हाम्रा दु:ख - सुख र भोगाइका हरेक पाटाहरु समाबेश हुनेछन । आखिर जुन मातमा बच्चा जन्माए पनि सहि संस्कार सिकाउनु र त्यसलाई भरण्-पोशण गराउनु त जन्मदाताको कर्तब्य भित्रै पर्ला । जन्मदाता ब्लगका माता-पिताहरुले पोस्ट देखाउन र रङ्याउन मात्र भन्दा पनि सन्देश, सूचना र शेयरका लागि लेखे भने आफैले जन्माएको ब्लग (बच्चा)को अर्थ रहला । हुन त रचनाका लागि सुझाब दिने हैसियत त ममा छैन, र म ठुलो लेखक पनि होईन । बतासे छोरो (ब्लग)को पिताजी हुं, म । बतासेको बाउले परिवार नियोजनको तरिका सिकाउन अलि नमिल्ला । फेरि, फुर्शदमा जन्मदिनको पार्टी खान आउनुहुने तपाइहरुलाई म बेसम्मान गर्न पनि चाहन्न । आफूलाई फेरि धेरै लेखिरहने जांगर पनि लाग्न छाड्यो, आजकाल त । बोदो दिमाग । लेखनीय शिर्शक र क्षमता नभएर होला वा अल्छिपना । त्यसो त, यसबिचमा माइसंसार जन्मेपछि सक्रिय प्रख्यात "सामुहिक चौतारी - दौंतरी" को सक्रियता, ब्लगर भेला आयोजनालाई ब्लगिङ्प्रतिको प्रगति र एकजुटता प्रशंशायोग्य छ ।
कपी र पेस्ट प्रब्रितीको बिरोधी हुं, म । आदरणीय दाजु दिलिप आचार्यज्यूको लेख चोरिएका घटनाहरु हाम्रा सामु ताजै छन् । अरु आदरिणीय अग्रज ब्लग्गरहरुका लेख चोरिएका पनि बेला-बेलामा देख्न-पढ्न पाईन्छ, त्यो ठीक पक्कै होईन । दौंतरीको ब्लगर भेलामा उठेका "कपीचोर्" तरिकालाई निरुत्साहित पार्ने प्रयास पनि उत्तम भएको ठान्दछु । अर्को कुरा, लेख लेखेपछि कमेन्टको आशा गर्ने बानीको पनि म सपोर्टर होईन । म दार्शनिक बन्न खोजेको होइन, तर देखाउनको लागि म झुटो बोल्न चाहन्न । ध्रुब सत्य कुरो के हो भने ब्लगरहरुले कमेन्टको आशैले लेख लेख्छन भन्ने कुरो चाँही सांचो होईन । अब हामी परिवर्तन हुनुपर्छ । भाशण गरेको होइन, अब हामीले कमेन्ट नआएपनि लेख्ने गर्नुपर्छ । म अल्छि भएपनी आजका आदरणीय पाहुनाहरुलाई मेरो लेख्न आग्रह छ । सक्रिय बसन्त दाजु, दिलिप दाजु, बेदनाथजी, जोतारेजी, आकारजी, दूर्जेयजी (नाम छुटेका साथीहरु - मन मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ) लगायतका मित्रहरुको जागरुकताको प्रशंशा गर्नै पर्छ ।
तीन बर्षको यो दौरानमा मैले सोचे जति लेख्न त सकिन । पहिला शुरु गरें, तरिका र शुद्धता मिल्दैनथ्यो । अलि-अलि मिलाउन थालें, लेखिन्थ्यो । अहिले समय नै मिल्दैन । ब्यस्त भएको धमास त लगाएको होईन नै, तर पनि बच्चा हुर्कदैं गए पछि प्यार पनि कम हुंदोरहेछ कि क्या हो, 'यस्तै भैरहेछ' भनेर चल्नुपरेको छ । तीन बर्षमा लेखिएका लेखहरुमा "एउटा बिरामीको बिछोड प्रेम कथा" सबै भन्दा चर्चित भएर होला, 'धेरै पढिएको' लिस्टमा छ । परदेशमा गुजारा चलाउन दु:ख गर्नुहुने साथीलाई कालेहरुले गोली हानेको सत्य घटना "सालाहरुको गोलीमा डराइमर्नु जिन्दगी" दोस्रो धेरै पडिएको दर्जामा छ । "तिमीलाई लेखेको चिट्ठी" तेस्रो र "कात्रोमा खल्ती नहुनेरहेछ" चौथो दर्जामा रहेको रहेछ । जे लेखे सबै सत्यमा आधरित लेखें, जे देखें, त्यो लेखें, जे भोगें, त्यो लेखें । भोगाइहरु धेरै थिए, एउटै शिर्शकमा सबै अटाउन खोजाएर सबै सकिए, त्यसैले लेख्ने धेरै कुराहरु छैनन । जे अब देखिन्छ, त्यो अबश्य अब लेख्ने नै छु । छोराको जन्मदिनमा यहि छ, बाचा ।
अन्तमा, सहानुभुति प्रदान गराउनुहुने, लेख पढिदिनुहुने, सल्लाह-सुझाब दिलाउनुहुने, माया गर्नुहुने, गाली गर्नुहुने र समय मिलाएर "खुल्लामन्च" छिर्नुहुने सबैप्रति आभारी छु । तीन बर्षको अबधिमा ११९६८ चोटि खुल्लामन्च छिर्नुहुने सबैप्रति साधुबाद ! खुल्लामन्च मन पराई जोडिनुहुने ८८ मित्रहरुप्रति धन्यबाद ! जय ब्लगिङ !!!